ကျောင်းဖွင့်ချိန်ကိုစောင့်နေသော ဆရာနည်းပါးမှုပြဿနာ | Frontier Myanmar
ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရမည့် အချိန်ထက် နှစ်လနောက်ကျခဲ့ပြီးနောက် အစိုးရသည် စာသင်ကျောင်းများကို ကြောင့်ကြမှုများဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်သည်။ နဝမတန်းနှင့် ဒသမတန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများသာ ဦးဆုံးပြန်တက်ရမည်ဖြစ်ပြီး စာသင်ချိန်များကိုလည်း အလျင်းသင့်သလိုစီစဉ်ထားကာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်ကိုအသွင်ပြောင်းလဲစေမည့် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေရန် စည်းမျဉ်းများလည်း ချမှတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်သူ စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည့် မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် အစိုးရစာသင်ကျောင်းများတွင် စာသင်ချိန်များအဆုံးသတ်လုရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အချိန်ဆိုလျှင် ဇွန်လပထမဆုံးအပတ်တွင် ကျောင်းပြန်ဖွင့်သော်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့် အစိုးရသည် စာသင်နှစ်ကို နောက်ဆုတ်လိုက်ရသည်။
ဇွန် ၁၉ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်သူ ၂၈၆ ဦးရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း ကူးစက်သူများတွင် အခြေခံပညာကျောင်းသားတစ်ဦးတလေမျှမပါဝင်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဇူလိုင် ၁၃ မှ ၁၇ ရက်အထိ ကျောင်းအပ်လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အတန်းကြီးနှစ်တန်းသည် ဇူလိုင် ၂၁ ရက်မှစ၍ သင်ကြားမှုများကို စတင်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားအတန်းများအတွက် ရက်မသတ်မှတ်ရသေးချေ။
ကျောင်းသားကြီးများသည် စည်းမျဉ်းသစ်များကို ပိုမိုလိုက်နာနိုင်ခြေရှိနေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဦးဆုံးကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများကပြောသည်။ ဒသမတန်းသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဦးစားပေးရခြင်းဖြစ်သည်။
ကျောင်းပြန်တက်သည့် ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းဝင်ပေါက်တွင် ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းစည်းနှစ်ခုနှင့် မျက်နှာကာနှစ်ခုတို့ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်များအရ ကျောင်းတွင်းရှိ မုန့်ဆိုင်များကို ပိတ်ထားဦးမည်ဖြစ်ကာ ကျောင်းသားများသည် လူ ၂၀ သတ်မှတ်ထားသည့် အခန်းထဲတွင် တစ်ခုံနှင့် တစ်ခုံကြား ခြောက်ပေခြားထားသည့် စားပွဲများ၌သာ ထိုင်စားရမည်ဖြစ်သည်။ စာသင်ခန်းများတွင်း ပိုးသတ်ဆေးမကြာခဏဖြန်းမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီရန်အတွက် အတန်းချိန်လေးချိန်ခွဲထားပြီး ကျောင်းအရွယ်အစားနှင့် ကျောင်းသားဦးရေအပေါ်မူတည်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာအချိန်သတ်မှတ်ပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အတန်းကြီးနှစ်တန်းအတွက် အထက်တန်းကျောင်း ၆၁၇ ခုသည် ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး စာသင်ကျောင်း ၂၄၇၁ ကျောင်းသည် နဝမတန်းနှင့် ဒသမတန်းတို့ကို တစ်ပတ်စီ အလှည့်ကျသင်ကြားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်စာသင်ကျောင်း ၂၄၁၀ ကျောင်းသည် အတန်းကြီးနှစ်တန်းကို နံနက်ပိုင်းနှင့် နေ့လည်ပိုင်းခွဲကာ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ စာသင်ကျောင်း ၁၄၄ ကျောင်းသည် အတန်းကြီးနှစ်တန်းကို သုံးရက်စီ အလှည့်ကျသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အစီအစဉ်အတိုင်း ကိုက်ညီစေရန်အတွက် နောက်ထပ်ဆရာ၊ သင်ကြားရေးပစ္စည်းနှင့် လက်ဆေးကန်များ ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးများက တောင်းဆိုထားသည်။ အများပြည်သူအနေဖြင့် COVID-19 အန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပေါ့လျော့ခြင်းမရှိရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆက်လက်သတိပေးနေချိန်တွင် စိုးရိမ်ပူပန်နေသည့် မိဘများကလည်း ကူးစက်နိုင်ခြေနည်းသွားသည်အထိ ကျောင်းပြန်ဖွင့်မည့်အချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းပေးရန် လိုလားနေကြသည်။
ကလေးငယ်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပါက နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်း ကနဦးလေ့လာမှုများအရသိရှိခဲ့ရပြီးဖြစ်သော်လည်း ကလေးများတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ခြေမည်မျှရှိမည်ကို မသိနိုင်သေးရာ ဆွေမျိုးများနှင့် ဆရာများအတွက် အန္တရာယ်ရှိနေပြန်သည်။
ကျောင်းသားတစ်ဦး COVID-19 ကူးစက်ခံထားရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် စာသင်ကျောင်းကို ချက်ချင်းပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ဇွန် ၃ ရက်တွင် Frontier သို့ပြောသည်။ ရောဂါလက္ခဏာပြသည့် မည်သည့်ကျောင်းသားကိုမဆို COVID-19 ရှိမရှိစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
မိဘများသည် သားသမီးများအား စာသင်ကျောင်းသို့ပို့ရန် ဥပဒေကြောင်းအရ တာဝန်မရှိသော်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ပြောခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုးကမူ ကျောင်းသားများအတွက် အန္တရာယ်မရှိကြောင်း ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မကြာသေးမီတွင်ရှိခဲ့သည့် COVID-19 အတည်ပြုလူနာများသည် ပြည်ပပြန်များဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းကူးစက်မှုနှုန်းနည်းပါးကာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများထိရောက်ခြင်းတို့ကို ၎င်းက ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
“အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးမယ်လို့ မထင်ပါဘူး၊ဝန်ကြီးဌာနက ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ထားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောသည်။
Students leaveaschool in Yangon’s Mingalar Taung Nyunt Township after sittingamatriculation exam in March. (Thuya Zaw | Frontier)
ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်မီက စာသင်ခန်းတိုင်းတွင် ကျောင်းသား ၄၀ ဖြင့် သင်ကြားမှုမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း စည်းမျဉ်းသစ်များအရ စာသင်ကျောင်းများသည် ကျောင်းသားဦးရေကို ထက်ဝက်လျှော့ချရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြား ကျောင်းသားများကို သင်ကြားရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် နောက်ထပ်ဆရာများစွာ အရေးတကြီးလိုအပ်လာခဲ့သည်။
လက်ရှိရှိပြီး အမာခံ ဆရာ ၁၀ ဦးအပြင် နောက်ထပ်ဆရာသုံးဦးကိုသာ ရမည်ဆိုပါက နဝမတန်းနှင့် ဒသမတန်းကျောင်းသား ၄၀၀ ကို အခန်း ၂၀ ခွဲပြီး သင်ကြားပေးနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ အမှတ် ၁ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါ်ဝင်းရည်မွန်က ဇွန် ၈ ရက်တွင် Frontier သို့ပြောသည်။
“ဒသမတန်းကျောင်းသားတွေကိုသင်ရမယ်ဆိုရင် နဝမတန်းကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းပိတ်ပေးထားမယ်၊ နဝမတန်းသားတွေအလှည့်ရောက်ရင် ဒသမတန်းကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းပိတ်ပေးမယ်၊ ဒီလိုပဲဆက်လုပ်နေရမှာပဲ၊ဒါကြောင့် ဆရာတွေထပ်လိုနေတာ၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကို တောင်းဆိုထားပါတယ်” ဟု ဒေါ်ဝင်းရည်မွန်က ဆိုခဲ့သည်။
စာသင်ခန်းတွင်း ကျောင်းသားဦးရေ ကန့်သတ်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထက်တန်းကျောင်းဆရာရှားပါးမှုပြဿနာပိုမိုဆိုးရွားသွားနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆရာများသည် အသက် ၆၀ တွင် ပင်စင်ယူရသော်လည်း လက်ရှိတောင်းဆိုမှုများအရ အငြိမ်းစားဆရာများကို စာပြန်သင်လာရန် တိုက်တွန်းသင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ် ဦးဇော်မျိုးလှိုင်ကပြောသည်။
သို့သော် အသက် ၆၀ ကျော်ဆရာများနှင့် ရောဂါအခံရှိသည့် ဆရာများသည် COVID-19 ကူးစက်ခံရပါက ရောဂါသည်းနိုင်ခြေပိုများသူများဖြစ်ကြသည်။
“ဆရာလိုအပ်ချက်ကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် စာသင်ကျောင်းတွေ အခက်တွေ့လိမ့်မယ်” ဟု ဦးဇော်မျိုးလှိုင်ကပြောသည်။
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရနှင့် ဆရာဖြစ်သင်ကောလိပ်များမှသင်တန်းဆင်း ၁၄၀၀၀ ခန့်ကို ခေါ်ယူခန့်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီး ဦးမျိုးသိန်းကြီးက မေလအကုန်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်၌ လွှတ်တော်အမတ်များအားပြောသည်။
သို့သော် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စာသင်ကျောင်းများကို ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် ပြန်ဖွင့်နိုင်မဖွင့်နိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်အမတ်များက သံသယဝင်နေကြသည်။
နောက်ထပ်စာသင်ခန်း၊ ထိုင်ခုံနှင့်စားပွဲခုံများကို လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ရှိ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်တုတ်( အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ မန္တလေး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၇) က မေ ၁၀ ရက်တွင် Frontier သို့ပြောသည်။
“စာသင်ကျောင်းတွေကို ပြန်ဖွင့်ဖို့လိုပေမယ့် ပြင်ဆင်တာတွေကို အချိန်မီပြီးဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟု ဦးကျော်တုတ်ကပြောသည်။
စာသင်ကျောင်းများ၌ ဆရာအင်အားလိုအပ်ပါက ဆရာများကို အလုပ်ချိန်နှစ်ချိန်ဆင်းရန် ဖိအားပေးနိုင်ပြီး အတန်းချိန်များကို ခွဲထားလိုက်ပါက ဆရာတချို့သည် တစ်ပတ်လျှင် ခြောက်ရက် အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးများကပြောသည်။
ဗိုလ်တစ်ထောင်ရှိ စာသင်ကျောင်းများတွင် နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းနှင့် ပရိဘောဂများမလိုအပ်ကြောင်း ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ ပညာရေးအရာရှိ ဒေါ်ခင်သူဇာစိမ်းကပြောသည်။ ကျောင်းများပြန်ဖွင့်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာများကလည်း မှတ်ယူထားကြသည်ဟု သူကပြောသည်။
A teacher at Grindstone private school in Yangon’s Htantabin Township conductsaclass over Zoom,avideoconferencing software that has enabled classes to continue remotely using the internet. (Thuya Zaw | Frontier)
တချို့အတွက်လည်း Zoom နဲ့စာသင်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များကို ပညာရေးကဏ္ဍတွင် မဖြစ်မနေအကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ရာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများတွင်လည်း ဆရာပြတ်လပ်မှုပြဿနာရှိလာခဲ့သည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် နောက်ထပ်ဆရာများကို မခန့်အပ်နိုင်ပါက လက်ရှိဆရာများသည် အလုပ်ဝန်ကို နှစ်ဆထမ်းရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတစ်ပင်မြို့နယ်ရှိ Grindstone ပုဂ္ဂလိကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဝဏ္ဏထွန်းကပြောသည်။
နှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်သင်တန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားရသဖြင့် Grindstone အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသည် ဒသမတန်းကျောင်းသားများ စာနှင့်အဆက်မပြတ်စေရန်အတွက် Zoom ဖြင့် သင်ကြားမည့် အချိန်စာရင်းများကို ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ရသည်။
“ကျောင်းသားတွေကို သင်ခန်းစာတွေ အချိန်မီမသင်ပေးနိုင်မှာကို စိုးရိမ်ပါတယ်” ဟု ဦးဝဏ္ဏထွန်းက ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့် ဆော့ဝဲကို အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောသည်။
မိဘတချို့ကတော့ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် သင်ကြားမှုကို ကြိုဆိုခဲ့ကြသော်လည်း ကျောင်းသားအများစုကမူ စာသင်ကျောင်းသို့ ပြန်သွားချင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်း Frontier ၏မေးမြန်းမှုအရ သိရသည်။
စာသင်ခန်းထဲတွင် စာကိုပိုအာရုံစိုက်နိုင်ကြောင်း Grindstone မှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူ မနှင်းဝတ်မှုန်က ပြောသည်။
“အွန်လိုင်းသင်တန်းကိုမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊ သင်နေကြပုံစံတွေကို ပိုသဘောကျတာမို့ပါ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုကို အစိုးရကျောင်းများတွင် အသုံးပြုရန် စဉ်းစားခဲ့သော်လည်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူဦးရေ နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝန်ကြီးဌာနသည် စာသင်ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့၏ပြောခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဋ္ဌေးကပြောသည်။
အစိုးရကျောင်းများနှင့် ကျောင်းသားတိုင်းတွင် ကွန်ပျူတာများနှင့် စမတ်ဖုန်းများမရှိသောကြောင့် အစိုးရကျောင်းများသည် အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု မထင်ကြောင်း နဝမတန်းကျောင်းသားတစ်ဦး၏မိခင် ဒေါ်သင်းစုခိုင်ကပြောသည်။
သု့ိသော် ၎င်း၏သားသမီး ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမည်ကိုလည်း ဒေါ်သင်းစုခိုင်က စိုးရိမ်နေသည်။ “ပုံမှန်အတန်းတက်ရတာထက် အွန်လိုင်းကသင်တာကို ပိုသဘောကျပါတယ်၊ အလယ်တန်းကျောင်းတွေကို သြဂုတ်မှာပြန်ဖွင့်ကောင်းဖွင့်နိုင်တယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် ကူးစက်မှုနှုန်းလည်းကျသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။